Abakhiqizi Bangaphandle, Abahlinzeki - I-China Outdoor Factory
izicathulo ezisezingeni eliphakeme lendoda yezimboni, izithengisi ezintsha ezishisayo, izicathulo zezemidlalo amadoda
Zilungiselele usuku olugcwele injabulo emzileni esicathulweni sezintaba! Isikhumba seFaux ne-mesh ephezulu. Ukuvalwa kwensimbi. I-cap toe cap evikelekile. Isithende sidonsa imvulo. Ulimi oluhlanganisiwe nekhola. Ukufakwa kwe-mesh okuphefumulayo kunikeza umuzwa omuhle wesicangu. I-EVA midsole inikeza induduzo ezinzile. I-Rubber Outole ihambisa ukuqina kokusebenza okuphezulu, ukuqina, nokudonswa kwemininingwane yomkhiqizo Inombolo No: 5053 Igama lomkhiqizo: isitayela sangaphambilini sefektri esishisayo esisezingeni eliphezulu sangaphansi amadoda isembozo se-Upper: i-synt zokwenziwa, isikhumba se-faux, mina ...
Izicucu Zokwethenjelwa Zangaphandle Ezethembekile Zangaphandle Kwabesilisa Athletic izicathulo
Idizayini ethembekile ephezulu nokubamba okuphezulu kwesicaka esihamba ngezitimela kuzoqinisekisa ukuthi isimo sezulu esibi asinciphisi izinhlelo zakho zokuhamba. Izicucu eziphansi ezisezingeni eliphansi zokuhamba kahle. Imisipha evaliwe evamile engenhla enezimbambo ezenzelwe ukwenziwa. I-syntethetic toe cap kanye nesithende sokuvikela okungeziwe kwe-abrasion. Isitayela se-lace-up sendabuko esithandwayo. Ukufakwa kwendwangu okuphefumulayo okungeziwe kwenduduzo engaphakathi. I-midsole engasindi yokududuza okuhlala isikhathi eside, ukushushuluza ophakeme, kanye nokubuya kwamandla amakhulu. L ...
umklamo omusha wokuhamba ngezindwangu ezimfashini izicathulo zokuphefumula zemfashini amadoda
Izicathulo zokuhamba izintaba ziqinisekisa ukuthi uhlala uqinile futhi uqiniseka ezinyaweni zakho usuku lonke ngenkathi uqhubeka nokuhamba ngalezo zindlela. Izicwecwe zokukhanya izintaba ezingasindi zenziwe ngendwangu kanye ne-pu engenhla. I-Textile lining yokugqoka ongaphefumula. I-DIV-density compression ebunjiwe ye-EVA midsole yenzelwe ukunikela ukumelana okuthe xaxa kokubopha isikhathi eside nokusekelwa. I-anatomical high-rebound footbed yenduduzo yosuku lonke. Irabha elikhethekile lihlinzeka ngobuqili be-grippy. Inombolo Yomkhiqizo Womkhiqizo: 5051 Pro ...
Ukufika okusha I-US 12 Intwasahlobo Yenziwe eChina Izicucu Zangaphandle Ezivunayo
Vikela i-adventurer yakho ekhuphuka-noma-phansi egqumeni esicathulweni esithembekile sokuhamba. Izicucu eziqinile, ezisezingeni eliphakathi nendawo zokuphamba zenziwe ngamaphaneli omoya ophefumulayo kanye nokwembathisa okuqinile kokwenziwa. Ukuqamba okwenziwe ngokuqinile okuzungezile kufaka ukuvalwa kwe-lace-up, collar ethambile ehlanganisiwe, isithende sokudonsa kanye nesithende sesithende esivikelayo. Kuboniswa i-EVA yonyawo egudwe kanye nokuphuma kwerabha enendawo enhlobonhlobo ukuboleka ubuhle obuhle kakhulu. Inombolo Yolwazi Lomkhiqizo Womkhiqizo: 5050 Igama lomkhiqizo: i-mid cut hiking ethandwa kakhulu isicucu sangaphandle s ...
Izicucu zakamuva zezentaba eziphakeme zasentwasahlobo eziphakeme
I-boot izokugcina uphephile ngenkathi uhamba ngezinyawo zakho noma usebenza ezindlini ezinkulu ngaphandle ngenduduzo yokuzivikela nokubamba okuhlala isikhathi eside kwe-Outole. I-Camouflage nylon mesh kanye ne-synt synt pu engenhla. I-boot-profiles ephezulu inikela ngokuvikelwa kwe-ankle. Ukufakwa kwendwangu okuphefumulayo okungeziwe kwenduduzo engaphakathi. Uhlelo lwendabuko lokufaka endaweni evikelekile okufanelekile. Isisindo esingasindi, i-fork shank eqinile iqinisekisa ukuguquguquka nokuqina. I-high-rebound midsole idonsa umthelela wokufaka kahle i-shock shock kanye nemisipha yezinyawo zakho ...
Izicucu ze-2020 ze-Classic Zangaphandle ezi-Durable Mesh Breathable Hiking Sport Zabesilisa nabesifazane
Izicucu ziqhosha ngensimbi engasindi kodwa ihlala isikhathi eside ngensimbi emile elungele ukuthatha zonke izinhlobo zomhlaba. Izicucu eziphansi zokuhamba ngezinyawo eziphansi zenziwe nge-mesh yokusebenza phezulu. Ukuvalwa kothayela ngezilungiselelo ezisheshayo nokubamba okuphephile. I-cap toe cap evikelekile. I-Mid-density EVA midsole yokuqina okuhlala ngaphansi kwezinyawo nokufakwa kwe-shock. I-Rubber Outole ihlinzeka ngomhluzi ohlala isikhathi eside. Isihloko Semininingwane Yomkhiqizo Cha: 5052 Igama lomkhiqizo: umbala wefashini onesitayela sangaphambi kwesitayela sangaphandle ...
Izicucu Ezishisayo Zezimboni Zase-Amazon Ezigijimayo Zangaphandle Kwabesilisa
Izicucu zezintaba zikuvumela ujabulele yonke imizuzwana esendleleni ngokwakhiwa kwayo okulungele isimo sezulu, ukwesekwa ngezinyawo zangaphansi, nokubamba okunokwethenjelwa. Isikhumba suede phezulu kanye nesibalo phezulu. Ulimi oluhlanganisiwe nekhola. Abavikeli bezinzwane ezivikelekile emadwaleni nasendaweni yokulahlwa kwezitimela. Uhlelo lwendabuko lwamakhethini lwentambo evikelekile. Isithende sokudonsa ithebhu. Uxhumano lwe-mesh enokuphefumula. I-insole ekhishwe kabusha ihlinzeka ngokusekelwa okuguquguqukayo nenduduzo engaphansi kwezinyawo. Isikhunta esibunjiwe se-EVA esibunjiwe sokuqina nokududuza. Ukuphuma kwe-GRIP kuhlinzeka ngomkhondo oqinile ...